यही पुस २५ गतेदेखि २८ गतेसम्म काठमाडौंको नैकापमा ‘खुला राष्ट्रिय महिला भलिबल प्रतियोगिता’ आयोजना हुने भएको छ । न्यू डाईमण्ड स्पोर्टस् क्लवले शुक्रवार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गरी यही पुस २५ गते बुधबारदेखि ‘न्यू डाइमण्ड कप खुला राष्ट्रिय महिला भलिबल प्रतियोगिता’ आयोजना गर्न लागिएको जानकारी गराएको हो । न्यू डाईमण्ड एकेडेमीको कोर्टमा हुने प्रतियोगितामा ८ वटा […]
इंग्लिस प्रिमियर लिग फुटबलमा लिभरपुलको अपराजित यात्रा टुंगियो
एजेन्सी । इंग्लिस प्रिमियर लिग फुटबलमा लिभरपुलको अपराजित यात्रा टुंगिएको छ । गएराति भएको खेलमा लिभरपुललाई म्यानचेस्टर सिटीले २–१ ले हराएको हो । खेलमा सिटीका लागि सर्जियो अगुएरो र लेरोए सानेले एक–एक गोल गरे । लिभरपुलका रोबर्टो फर्मिनोले एक गोल फर्काए । जितसँगै म्यान्चेस्टर सिटीले लिभरपुलसँगको अन्तर चार अंकमा झारेको छ । लिभरपुलको २१ खेलबाट […]
ए डिभिजन लिगः को बन्ला तेस्रो, थ्रीस्टार कि आर्मी ?
अन्तिम चरणका खेल शनिबारबाट काठमाडौं । काठमाडौंमा जारी शहीद स्मारक ए डिभिजन लिगको यो संस्करण आउँदो मंगलबार सकिने भएको छ । लिगको १३ मध्य १२औं चरणका खेल समाप्ति भइसकेका छन् । जसमा च्याम्पियन हुने र उपविजेता हुने दुई टोलीको टुंगो लागिसकेको छ भने तेस्रो स्थानको टुंगो लाग्न बाँकी छ । बिहीबार अखिल नेपाल फुटबल संघ […]
खप्तड गोल्डकप : उद्घाटन खेलमा सुदूरपश्चिम र झापा भिड्ने
काठमाडौं । धनगढीमा आयोजना हुने नेपाल आईस सुदूरपश्चिम खप्तड गोल्डकपको उद्घाटन खेलमा आयोजक सुदूरपश्चिम र झापा ११ बीच प्रतिस्पर्धा हुने भएको छ । धनगढी रंगशालामा पुस २४ गतेबाट हुने प्रतियोगिताको पहिलो खेलमा झापा आयोजक खेल्ने पक्का भएपनि बाँकि टाइसिट भने आयोजकले ट्रफि सार्वजनिक कार्यक्रममा गर्ने भएका छन् । आयोजक नेपाल आइस सुदुरपश्चिम–११ फुटबल क्लबले बिहीबार […]
ए डिभिजन लिगः सरस्वती युथ र एपिएफको जीत
काठमाडौं । शहीद स्मारक ए डिभिजन लिग फुटबलअन्र्तगत आज भएका खेलमा सरस्वती युथ क्लब र विभागीय टोली एपिएफले जीत निकालेका छन् । सरस्वतीले च्यासल युथ क्लबलाई दुई–एक गोलअन्तरले हराएको हो भने एपएफीले पुलिस क्लबलाई चार–एक गोल्तरले पराजीत गर्दै शानदार जीत निकालेको हो । घरेलु मैदान हल्चोकमा एपीएफलाई जीत दिलाउन युवराज खड्काले दुई, राजेन्द्र रावल र […]
बिग ब्यास लिग क्रिकेटमा सन्दीपले आज चौथो खेल खेल्दै
काठमाडौ । नेपाली लेग स्पिनर सन्दीप लामिछानेले बिग ब्यास लिग क्रिकेटमा मङ्गलवार चौथो खेल खेल्दै छन् । सन्दीप रहेको टिम मेलबर्न स्टार्सले मेलबर्न रिनेगाडेससँग गर्न लागेको प्रतिस्पर्धामा सन्दिप लामिछानेले खेल्न लागेका हुन । नेपाली समयअनुसार दुई बजे मेलबर्न क्रिकेट मैदानमा खेल सुरु हुनेछ । अष्ट्रेलियामा आफ्नो खेल कौशल देखाइरहेका सन्दीपले अहिलेसम्म तीन खेलबाट सात विकेट […]
काठमाडौं । अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाले नेपाली राष्ट्रिय फुटबलका लागि फेरि विदेशी प्रशिक्षक ल्याउने भएको छ । नयाँ प्रशिक्षक छान्नका लागि अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाको प्राविधिक समितिले छलफल गरिरहेको छ । यसअघि जापानीज प्रशिक्षक ग्योतुको कोजीको भिसाका कारण फिर्ता भएपछि नेपाली राष्ट्रिय टिमको जिम्मेवारी वालगोपाल महर्जनलाई दिइएको छ । विदेशी प्रशिक्षकको रुपमा अहिले […]
फाल्गुनन्द गोल्डकपकको खेल तालिका सार्वजनिक
काठमाडौं । राष्ट्रिय विभूति महागुरु फाल्गुनन्दको सम्मानमा प्रत्येक वर्ष फिदिम सपोर्टिङ क्लबले आयोजना गर्दौ आएको फाल्गुनन्द गोल्डकपको दशौं संस्करणको खेलतालीका सार्वजनीक भएको छ । यसपटक प्रतियोगितालाई रुस्लानले मुख्य प्रायोजन गर्ने भएको छ । फिदिममा पुस २१ गते देखि ३० गते सम्म आयोजना हुने गोल्डकपको खेलतालीका आइतबार पत्रकार सम्मेलनमा सार्वजनिक गरिएको हो । यसपल्टको संस्करण भने […]
खप्तड गोल्डकप आर्मीले खेल्न नपाउने, अनुशासन कारबाही
काठमाडौं । मोफसलको सर्वाधिक धनराशिको तेस्रो संस्करणको अन्तर्राष्ट्रिय आमन्त्रण सुदुरपश्चिम खप्तड गोल्डकप फुटबलको तयारी तीव्र पारिएको छ । पुस २३ गतेदेखि हुने प्रतियोगितालाई सिजी ब्रुअरीको नेपाल आइसले निरन्तर साथ दिएको छ । लगातार दोस्रो संस्करणको मुख्य प्रायोजक बनेको नेपाल आइसले शनिबार खप्तड गोल्डकप आयोजक सुदुरपश्चिम–११ स्पोर्टस् क्लबसँग सम्झौता प्रायोजना गरेको छ । सम्झौतामा आयोजकका अध्यक्ष […]
आहा ! रारा गोल्ड कप फागुनमा
कास्की । आहा ! रारा गोल्ड कप फुटबल प्रतियोगिताको १७ औं संस्करण फागुन ९ गते देखी १८ गतेसम्म हुने भएको छ । पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय खेलकुद विकास समिति र जिल्ला खेलकुद विकास समिति कास्कीको समन्वयमा पोखरा रंङ्गशालाको खेल मैदानमा आयोजना हुने प्रतियोगितामा विदेशी र ए डिभिजनका क्लबहरु, पुर्व र पश्चिम क्षेत्र टिमहरु र आयोजक सहारा क्लब […]